यी हुन् चर्चित फुटबल खेलाडीका श्रीमती तथा गर्लफ्रेण्ड
कसले जित्ला अफ्रिका कप अफ नेसन्सको उपाधि ?
विराटनगर । पाँचौँ साफ महिला फुटबल प्रतियोगिताको आज भएको पहिलो सेमिफाइनल खेलमा नेपालले श्रीलङ्कालाई ४–० पराजित गरी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।
काठमाडौँ । सिङ्गापुरमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् ९आइसिसी० टी–२० विश्वकपको एशिया छनोटको अन्तिम चरणको खेल तालिका आज सार्वजनिक भएको छ । आइसिसीले सार्वजनिक गरेको एशिया छनोटको अन्तिम प्रतियोगिता आगामी साउन ६ गतेदेखि १२ गतेसम्म सिङ्गापुरमा हुने भएको हो ।
रियल मड्रिड र बार्सिलोनाभन्दा पनि म्यानचेस्टर युनाइटेड धनी !
काठमाडौँ । विश्वै प्रतिष्ठित क्लबहरु कति धनी होलान् ? लाग्छ इंलिस क्लबको दबदबा धेरै नै छ । तर, इंलिस क्लबबाहेक अन्य क्लबहरु पनि उत्तिकै शसक्त रहेका छन् ।
रियल मड्रिडले कुन खेलाडी अनुबन्ध गर्दा फाइदा होलाः नेयमार कि एमबाप्पे ? यसो भन्छन् समिक्षकहरु
एजेन्सी । पिएसजीका दुई स्टार खेलाडीहरु यतिबेला रियल मड्रिड जाने हल्ला व्यापक चलिरहेको छ ।
‘प्रिमियर लिग ओभररेटेड’
एजेन्सी । स्विडेनका खेलाडी जलाटन इब्राहिमोभिचले इंग्लिस प्रिमियर लिगलाई ‘आरेभररेटेड’को संज्ञा दिएका छन् । म्यान्चेस्टर युनाइटेडका पूर्व खेलाडी समेत रहेका इब्राहिमोभिचले प्रिमियर लिगलाई उक्त संज्ञा दिएका हुन् ।
टक्लुहरुको लागि रोनाल्डोले खोले कपाल प्रत्यारोपण क्लिनिक
एजेन्सी । युभेन्ट्सका फवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डोले स्पेनमा कपाल प्रत्यारोपण क्लिनिक खोलेका छन् । स्पेनका नागरिक तथा अर्थतन्त्रलाई नै सघाउने गरि रोनाल्डोले प्रत्यारोपण क्लिनिक खोलेका हुन् ।
नेपाली फुटबल टिम आज कुवेत जाँदै
काठमाडौँ । मैत्रिपूर्ण खेलको लागि नेपाली फुटबल टिम आज कुवेत जाँदैछ । मार्च २१ तारिखमा कुवेतविरूद्द हुने खेलका लागि टोली आज त्यसतर्फ प्रस्थान गर्न लागेको हो । यसको लागि राष्ट्रिय टिमको नयाँ प्रशिक्षकका योहान कालीनले २३ सदस्यीय खेलाडी छनोट गरिसकेका छन् ।
काठमाडौं । उनी कहिलेकाहीँ फुटबल खेल्थिन् तर केटाहरुसँग । गाउँमा फुटबल खेल्ने केटी अरु थिएनन् । बजार (कटारी) मा भने केटीहरु फुटबल खेल्छन् भन्ने उनले सुनेकी थिइन् । तिनैसँग प्रतिस्पर्धा गर्न उनले केटीको छुट्टै टिम बनाउने सोचिन् ।